Orinasa lamba firakotra - Mpanamboatra lamba firakotra ao Shina, mpamatsy
Volon-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny bodofotsy
Ny singa kofehy Warp dia polyester, ny kiran'ny kofehy vita amin'ny kofehy dia volotsangana, ny tahan'ny fananganana ankapobeny dia 74% fibre vita amin'ny volotsangana + 26% polyester, endrika misy endrika Jacquard, lamaody.
Kitapo vita amin'ny akrilika vita amin'ny akrilika vita amin'ny kodiarana
Ny eo alohan'ilay bodofotsy dia polyester voaverina, izay tena voarindra ny lafiny avadika dia ny zanak'ondry fotsy vita amin'ny volon'ondry fotsy.
Franked Edge Recycled Acrylic Blanket
Fibre Recycled dia singa malaza be. Ny akora dia avy amin'ny vokatra vita amin'ny fibres nariana ary haverina ampiasaina amin'ny fampiasana faharoa. Tena sariaka amin'ny tontolo iainana.
Krismasy volom-borona krismasy mifono polyester roa-sisiny plush blanket
Ny lafiny eo anoloana dia vita pirinty amin'ny volon-trondro, ny lanjan'ny toradroa dia 230g, ny lafiny any aoriana dia ny lamban'ny zanak'ondry fotsy, ny lanjan'ny toradroa dia 220gsm, ny haben'ny bodofotsy iray manontolo dia 130 * 160cm, ny lanjan'ny bodofotsy iray manontolo dia 960g / Pc.
Akanjo vita amin'ny pirinty toy ny zaza vita amin'ny lamba volom-borona vita amin'ny polyester coral coral flleet
Ny lanjan'ilay bodofotsy iray manontolo dia 345g / Pc. Ny lamina fanontana amin'ny bodofotsy iray manontolo dia tena zazakely ary mety amin'ny ankizy.
Cotton Silk fanontam-pirinty
Ny mpiorina amin'ny kofehy Warp dia polyester, landy kofehy 10% landy 90% landy, ary ny tahan'ny fananganana ankapobeny dia 26% polyester + 67% landy + 7% landy, Jacquard.
Fehin-kibo fehin-kibo fehin-kibo vita amin'ny bararata vita amin'ny volotsangana
Ny mpiorina amin'ny kofehy Warp dia polyester, ny kiran'ny kofehy vita amin'ny kofehy dia volotsangana, ary ny tahan'ny famokarana ankapobeny dia 74% fibre bambu + polyester 26%
Kitapo malefaka sy habe azo entina, mety amin'ny hetsika rehetra dia fampiasa mahazatra tsy maintsy ananana. Ankafizo ny hafanana madio sy ny haitraitra, mifankatiava amin'ny fahalemem-panahiny, ary mifankatiava amin'ny hafanana
100% bodofotsy fibre
Ny vokany mangatsiaka amin'ny ankapobeny dia mety amin'ny fampiasana amin'ny fahavaratra ary manana fahatsapana fampangatsiahana malefaka. Iray amin'ireo entana tsy maintsy ananana ao amin'ny efitrano fandroana rivotra.
Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Fanodinana santionany sy famokarana, Lamba firakotra roa sosona, Palitao fanatanjahan-tena, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy,